Iyo Inofanirwa-Kuva NeRondedzero Yemukati ZVESE B2B Bhizinesi Zvinodiwa Kuti Upa Iyo YeMutengi Rwendo | Martech Zone
Zviri kundinetsa kuti B2B Vatengesi vanowanzoendesa kuwanda kwemishandirapamwe uye vanogadzira runyararo rusingagumi rwezvinyorwa kana zvemagariro midhiya zvigadziriso pasina chakanyanya kukosha, chakanyatsogadzirwa raibhurari yezvinyorwa kuti tarisiro yega yega iri kutsvaga kana uchitsvaga mumwe wavo anotevera, chigadzirwa, mupi, kana sevhisi. Nheyo yezviri mukati mako inofanirwa kupa zvakananga yako rwendo rwevatengi. Ukasadaro… uye vakwikwidzi vako vachiita… ucharasikirwa nemukana wako wekutanga bhizinesi rako semhinduro yakakodzera.
Verenga Zvakawanda Nezve Matanho Eiyo B2B Mutengi Rwendo
Nemutengi wega wega weB2B wandinobatsira, ini ndinogara ndichiona maitiro ekuratidzira pane kwavo kwakawanda kushambadzira mashandiro kana isu tichijekesa uye muchidimbu kupa zvidimbu izvi zvemukati:
Tarisiro inoda kunyatsonzwisisa dambudziko ravari kutsvaga mhinduro pamberi PENYANYA kutsvaga mhinduro. Kuzvimisikidza sechiremera chinonyatsonzwisisa dambudziko uye zvazvinoita pamutengi inzira ine simba yekuvaka ruzivo rwechiratidzo chako padanho rekutanga reB2B Rekutenga Rwendo.
Tsanangura dambudziko - Ipa ratidziro yekutanga, maanalogies, madhayagiramu, nezvimwewo zvinobatsira kutsanangura dambudziko iri zvizere.
Simbisa kukosha - Rubatsiro tarisiro yekunzwisisa iyo mutengo yedambudziko iro kubhizinesi ravo pamwe neiyo mukana wemukana kubhizinesi ravo kana dambudziko ragadziriswa.
tsvakurudzo - Kune here echipiri ekutsvagisa zviwanikwa izvo zvakanyora zvakazara nyaya iyi uye zvinopa huwandu uye zvakajairika tsananguro kune dambudziko Kuwedzera iyi data uye izvi zviwanikwa zvinovimbisa mutengi anogona kuti iwe uri ruzivo rune ruzivo. Ongororo yepuraimari inonakidza zvakare… inowanzo govaniswa uye inogona kuvaka ruzivo rwechiratidzo chako sevatengi vanotsvaga dambudziko.
muenzaniso: Shanduko yeDhijitari ndiyo nzira iyo makambani anosanganisa mhinduro dzedigital muzvinhu zvese zvebhizimusi ravo kutora mabhenefiti edhijitari uye kuramba pamberi pevanokwikwidza. Pakati, pane kuchengetedza mune otomatiki, kuvandudzwa kwedata kunyatso kuita uye nekukurumidza kuita sarudzo, kunzwisiswa kwakakwana kwevatengi, kushungurudzika kwevashandi kwakaderedzwa, uye kunatsurudzwa kwekuzivisa kuti unzwisise kuti chikamu chese chebhizinesi chiri kukanganisa sei hutano hwebhizinesi. Kunze kwekunze, pane mukana wekutyaira kuchengetedza, kukosha kwevatengi, uye kutengesa kwese nekwanisi yekutsvaga nekukwiridzira ruzivo rwevatengi munzira nyowani uye nehunyanzvi. McKinsey yakapa kuongororwa kwakadzama kunonongedza kune makumi maviri neshanu maitiro akanaka pahutungamiriri, kugona kugona, kupa vashandi simba, kusimudzira maturusi, uye kutaurirana kunoitisa shanduko yedigital inobudirira.
Tarisiro inogona kunge isingazive mhinduro dzese dzinowanikwa kwavari uye inogona kusanzwisisa zvizere kuti nei kudyara muchikuva chekunze kana sevhisi kwaizovabatsira. Rakavimbika, rwakadzama rondedzero yemhinduro rwakakosha kuzivisa vanotarisira vatengi kunyatsonzwisisa zvavanogona uye zvayakanakira, nezvayakaipira, uye mari inodiwa kune yega. Zvekare, izvi zvinokugadzika iwe pakutanga pakuita sarudzo uye zvinobatsira tarisiro kuti uone kuti iwe unonzwisisa zvese sarudzo.
Zviite-Iwe-Iwe - Kujekesa mashandiro anoita mutengi basa pachezvake hakusi kuvasundira kure nemhinduro yako, zvinovapa mufananidzo wakajeka wezve zviwanikwa uye mutsara wenguva wakakosha kuti uite basa ivo pachavo. Inogona kuvabatsira kufumura maburi mune tarenda, zvinotarisirwa, bhajeti, nguva, nezvimwe… uye kubatsira kunyatsovasundira kune chako chigadzirwa kana sevhisi seimwe sarudzo. Sanganisira anovimbika wechitatu-bato zviwanikwa zvinogona kuvabatsira.
Products - Tekinoroji dzinogona kubatsira sangano uye kurumbidza zvigadzirwa zvako nemasevhisi zvinofanirwa kunyatsotsanangurwa panguva ino. Iwe haufanire kuvanongedzera kumukwikwidzi, asi iwe unogona kutaura zvakajairika nezvekuti chigadzirwa chimwe nechimwe chinobatsira sei kugadzirisa dambudziko rawatsanangura mune yezvinotaridza dambudziko. Imwe mhedziso apa ndeyekuti iwe unofanirwa kunyatso tsanangura zvakanakira nezvakaipa zvechigadzirwa chimwe nechimwe, kusanganisira chako. Izvi zvinobatsira tarisiro yako mune inotevera nhanho, zvinodiwa kuvaka.
Services - Kutaura kuti iwe unogona kuita basa hakuna kukwana. Kupa zvakadzama kutarisisa kwemaitiro uye maitiro aunopa ayo anoedzwa nguva uye akazara zvizere inofanirwa.
Kusiyanisa - Ino inguva yakakodzera yekusiyanisa bhizinesi rako kubva kumakwikwi ako! Kana vakwikwidzi vako vaine musiyano wauri kurasikirwa nawo, ino inguva yakanaka yekudzora kukanganisa kweizvozvo mukana wavanogona kuve nawo.
Results - Kupa nyaya dzevashandisi kana nyaya dzenyaya kuti ujekese zvizere maitiro uye budiriro yemhinduro idzi zvakakosha. Ongororo yepuraimari nesekondari pamatanho ekubudirira, mhedzisiro inotarisirwa, uye kudzoka pane kudyara mari zvinobatsira pano.
muenzaniso: Makambani anowanzo gadzirisa mhinduro netarisiro yekushandura manhamba, asi shanduko yedigital inoda simba rakawanda mukati mesangano. Hutungamiri hunofanirwa kuve nechiono chakajeka chekuti kambani yavo ichashanda sei uye kuti vatengi vavo vachakwanisa sei kudyidzana kana kambani yawana danho rekushandurwa kwedigital.
Zvinosuruvarisa, McKinsey inopa data idzo isingasviki 30% yemakambani ese ari kubudirira mukushandura bhizinesi ravo digitally. Kambani yako inogona kubaya tarenda kuti ibatsire mukuita, jekiseni vanopa mazano kuti vabatsire, kana kuvimba pamapuratifomu auri kugadzira. Kujova tarenda kunoda danho rekukura iro mabhizinesi mazhinji anorwira nawo sezvo paine kushorwa kwepanyama kushanduka mukati. Vanachipangamazano vanoramba vachibatsira mabhizinesi mukushandurwa kwavo kwedhijitari vanonyatsonzwisisa njodzi, maitiro ekuvaka kutenga-mukati, maitiro ekufungidzira ramangwana, maitiro ekukurudzira uye kuvaka kugutsikana kwevashandi, uye kuisa pamberi shanduko yedhijitari yekubudirira. Mapuratifomu dzimwe nguva anobatsira, asi hunyanzvi hwavo uye kutarisisa hakuwanzoenderana neindasitiri yako, vashandi vako, kana danho rako rekukura.
Nemakumi emakore echiitiko, edu shanduko yedhijitari maitiro akagadziridzwa nezvikamu zvakasiyana kutungamira shanduko yako yedhijitari - kusanganisira kuwanikwa, zano, kusimudzira kwehunyanzvi, kuita, kutama, kuita, uye kugadzirisa. Nguva pfupi yadarika takachinja sangano rerubatsiro munyika, rakatama zvizere uye rikagadzirisa mhinduro yebhizinesi, vakagadzira vashandi vavo, uye ivo vakakwanisa kufambira mberi pasi pebhajeti uye pamberi pechirongwa, vachinyatsoziva kudzoka kwavo mukudyara.
Sekambani diki, yako kambani ichagara iri pamberi kune vatinoshanda navo. Vatungamiriri vauchasangana navo mukutengesa kutenderera ndivo vanhu vamwe chete vachange vachityaira rako rakabudirira shanduko yedigital.
Kana iwe uchigona kubatsira tarisiro yako uye vatengi kunyora zvavanoda, unogona kuenda kumberi kwemakwikwi ako nekuburitsa simba uye zvimwe zvinobatsira zvekushanda nesangano rako.
vanhu - ipa kunzwisiswa kwakajeka kwetarenda, ruzivo, uye / kana hunhu hunodiwa kugadzirisa dambudziko. Kunze kubva ani inodiwa, zvakare sanganisira kuyedza kunodiwa kugadzirisa dambudziko. Makambani haawanzo kudarika vashandi kubata zviitwa, saka kumisikidza tarisiro padanho rekuyedza uye kuti chigadzirwa chako kana sevhisi (s) inogona kudzikisira izvo zvinodiwa pasangano zvinobatsira.
urongwa - Famba tarisiro yako kubudikidza nemaitiro awakagadzira muchikamu chemhinduro kuti uve nechokwadi chekuti vanogona kufungidzira nhambo yenguva pamwe chete nevevanhu neetekinoroji zviwanikwa zvinodikanwa mukati mese. Vabatsire ivo kuisa pamberi pekumisikidza kuti vawane kudzoka kukuru pane kudyara kutanga vachiri kufambira mberi kune zvinangwa zvenguva refu zvekugadzirisa dambudziko.
Risk - Chibvumirano cheZinga rebasa, kutevedza zviri pamutemo, marezinesi, chengetedzo, kudzosera kumashure, zvirongwa zvekudzikamisa… makambani anowanzovaka zvinodiwa padambudziko asi achifungidzira pamusoro penyaya dzinogona kukanganisa kuedza kwavo mukushandisa mhinduro.
Kusiyanisa - Kana iwe uine mukana wakasarudzika kana kukwikwidza nevakwikwidzi vako, zvinofanirwa kuverengerwa mune izvi zvinodiwa kuti zviiswe pamberi netarisiro yako. Makambani anowanzo kurasikirwa kana kuhwina mukana zvichibva nenyaya imwechete.
muenzaniso: Download yedu yakazara whitepaper uye yekutarisa maitiro ekuchinja rako bhizinesi. Mariri, tinonyatso tsanangura zviwanikwa zvevanhu, hurongwa hwese hwakatepfenyurwa, uyezve nzira yekudzora njodzi yekundikana mukushandurwa kwako kwedhijitari.
Kwese uko vanhu vari kutsvaga mhinduro, bhizinesi rako rinofanirwa kunge riripo. Kana izvo zviri zvekutsvaga zvemamwe mazwi akakosha, iwe unofanirwa kuverengerwa. Kana iwo ari indasitiri zvinyorwa, iwe unofanirwa kuve neiripo. Kana vanhu vakatsvaga uye vakawana mhinduro kuburikidza neanokurudzira, iye anokurudzira anofanirwa kuziva kugona kwako. Uye… kana vanhu vakatsvaga mukurumbira wako pamhepo, panofanirwa kunge paine nzira yemazano, ongororo, uye zviwanikwa zvinopa izvo tarisiro dzekuti ndiwe sarudzo yakanakisa yavanayo.
simba - Iwe uripo kune ese akabhadharwa, akahwina, akagovaniswa, uye ane vezvenhau? Kunyangwe iko kutsvaga kweYouTube kwedambudziko, muongorori mushumo pane yako indasitiri, kana shambadziro inomhanya pane yekushambadzira indasitiri… uripo here?
ndangariro - Wakave uchizivikanwa nevechitatu mapato zvitupa, mibairo, pfungwa dzehutungamiriri, nezvimwe. Kuzivikanwa kwese kwemaindasitiri kunopa vangangove vatengi chivimbo uye kuvimba sezvavanoongorora vanotengesa.
Mukurumbira - Uri kunyatsoongorora nekupindura kune zveveruzhinji zvirevo, ratings, uye ongororo yezvako zvigadzirwa nemasevhisi online? Kana usiri uye vakwikwidzi vako varipo, zvinoita sekunge sangano ravo rinoteerera zvakanyanya ... kunyangwe kana ongororo yacho isina kunaka!
Personalization - Yakasarudzika uye yakapatsanurwa nyaya dzenyaya uye zvipupuriro zvevatengi zvakakosha pakusarudzwa kwevatengesi. Vatengi veB2B vanoda kunzwa vane chivimbo chekuti wakabatsira vatengi senge ivo - nematambudziko akafanana avanazvo. Zvemukati yakanangwa kune chaiwo manas inoenderana neanogona kutenga.
Verenga Zvakawanda Nezve Hukama hweMunhu neMutengi Nzendo uye Zvekutengesa maFunnel
Hapana muenzaniso wekuratidza pano… uku kuongorora kwakazara kwemasvikiro nemikana yekuona kuti unoonekwa sekambani yakanaka yeB2B yekushanda nayo.
Kugadziriswa Kwe Solution uye Kubvumirana Kusika
Vatengi veB2B vanowanzo tenderwa nekomiti. Izvo zvakakosha kuti iwe ubatsire kutaura nei iwe uri chaicho chigadzirwa kana sevhisi kupfuura iye munhu ari kutsvagisa muchikwata icho pakupedzisira chinopa danho rekutenga.
Kurera - Makambani haagare aine bhajeti kana nguva yekutora mari nekukurumidza muzvigadzirwa kana masevhisi. Uye ivo havadi kugara vachibata yako yekutengesa timu uko kwavano vhura ivo pachavo kune kukumbira. Kupa zvichena, kurodha pasi, maemail, webinars, podcast, kana dzimwe nzira dzekuti tarisiro yako irambe ichiwana kubatwa uye kufuridzirwa pasina kutengeswa kwakakosha sezvo tarisiro ichiramba ichizvitungamira-yavo rwendo rwekutenga.
ruyamuro - Makambani haadi kutengeswa, vanoda rubatsiro. Zvemukati mako zvinotyaira vanhu kunotengesa, kana kune zviwanikwa zvinogona kuvabatsira? Mafomu ako, chatbots, tinya-kusheedzera, kuronga demo, nezvimwewo zvinofanirwa kunge zvakagadzirirwa kuvapa rubatsiro rwakakosha… kwete zvekutengesa zvakaoma. Bhizinesi rinopa rubatsiro rwakanyanya mukudzidzisa tarisiro kazhinji ibhizinesi rinowana mukana.
Solutions - Unogona here kuratidza kuratidzwa kwechigadzirwa kwakanangana nesangano rauri kutsvaga kutengesa? Kugadzirisa chinongedzo kana kuisa chiratidzo mhinduro kunogona kubatsira timu kuona mhinduro yauri kuunza patafura. Kunyangwe zvirinani, kupa muyedzo kana wekutanga kupa kunogona kukurumidza kugamuchirwa kwechigadzirwa chako kana sevhisi.
Gadzira Kudzoka pane Investment - Kubatsira yako tarisiro kuti unzwisise kukosha kana uchitsanangura dambudziko, uchivafamba nemhinduro, uye pakupedzisira uchipa chigadzirwa chako kana masevhisi semhinduro yakakodzera izvozvi inoda kuti iwe uvabatsire kuti vanzwisise kudyara nekudzoka kwayo. Izvi zvinogona kusanganisira kugona kumisikidza, mutengo, uye makotesheni munzira yekuzvishandira online.
Panguva ino, zvemukati zvinofanirwa kuzviputira zvese pamwechete uye waunotenga mutengi anofanirwa kunyatsonzwisisa kuti mhinduro yako yakavakodzera here kana kwete. Mabhizinesi anowanzo tya kukanzura chero tarisiro mune tariro yekuti vatengesi vavo vanomuka kuzorova nemutengi. Ndiwo mutoro wakakura uye unofanirwa kudzivirirwa. Chako chiratidzo chichavaka kutendeseka nekunongedza tarisiro kune iyo rudyi mhinduro, kwete nekuyedza kutengesa chako chigadzirwa kana sevhisi kune wese munhu!
Kana iwe uchibatsira vatengi seizvi, iwe unodzikisira musiyano uripo pakati pekutengesa-vanokwanisa vatungamiriri (MQLs) uye vatengesi-vanokwanisa vatungamiriri (SQLs), uchipa rako rekutengesa timu mukana wekuwana iyo rudyi mutengi kuyambuka tambo nekukurumidza.
Tags: simbab2bb2b zvirimob2b zvemukati zvinyorwavatengi rwendoZvidzidzo zvemhosvakubvumirana kugadzirwazvirongwa zvekushambadzira zvemukatikusiyanakuzivikanwa kwedambudzikokuonekwambirikirozvinodiwa kuvakangozimhinduro yekutsvagamhinduro yekusimbiswamutengesi sarudzomapepa machena